FPC ပစ္စည်း | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan OEM ODM-bestevafoam.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan FPC ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - FPC Material
FPC(ဖိုက်ဘာအမှုန် Composite),ဒါ့အပြင်အဖြစ်အမည်ရှိ“အော်ဂဲနစ်ပလတ်စတစ်”ဂျပန်မှာ,တစ်ဇီဝဖြစ်ပါသည်-တိကျတဲ့အချိုးအစားသဘာဝစက်ရုံအမျှင်များနှင့်ကစီဓါတ်ပါဝင်သောပလတ်စတစ်အမှုန်.FPC အတွက်စက်ရုံအမျှင်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်အကြွင်းအကျန်များကစိုက်ပျိုးရေးအမျိုးမျိုးကနေလာ,ထိုကဲ့သို့သောဆန်ခွံအဖြစ်,ဂျုံခွံ,ပြောင်းဖူးရိုး,ကြံ bagasse,အုန်းသီးခွံ,သစ်သားချစ်ပ်,နှင့်ကော်ဖီအကြွင်းအကျန်,စသည်တို့ကို.
ပလတ်စတစ်နှင့်ရာဘာနှင့်အတူရောနှောရရှိနိုင်.ထိုကွောငျ့,FPC အသုံးပြု. တိုက်ရိုက်ပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်ရော်ဘာပစ္စည်းပမာဏကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်.ဖြည့်စွက်ကာ,FPC လုပ်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်ပြန်သုံးနိုင်သောဖြစ်ပါသည်.ပလတ်စတစ်အပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပိတ်ပင်မှုလိုက်လျောညီထွေ,FPC နှင့်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်လိမ့်မည်.
FPC ၏ကွဲပြားအင်္ဂါရပ်များနှင့်အပလီကေးရှင်းကနေဖော်ပြခဲ့တဲ့အထက်တွင်အဖြစ်,နေ့စဉ်အသက်တာ၌ပလပ်စတစ်နှင့်ရာဘာထုတ်ကုန် FPC ၏စျေးကွက်များမှာ,ဟောင်း.ဖိနပ်ပစ္စည်းများ,ဘေးကင်းလုံခြုံကစားစရာ,အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများ,နှင့် pallets စသည်တို့ကို.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestevafoam.com/my/fpc-material.html